Pool Kaagaameen dubartiin bakkakoo akka buutun fedha jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Pool Kaagaameen dubartiin bakkakoo akka buutun fedha jedhan
Madda suuraa, RBA
Pireezidantiin Ruwaandaaa Pool Kaagaameen dubartiin bakka akka na buutu fedhiin qaba jedhan.
Kora biyyaalessaa Ruwaandaatti kaleeessa eegalameen Kaagaameen biyyi isaanii dubartoota gara aangootti fiduun akka milkoofte dubbatan. Gama kanaan sadarkaa addunyaattillee Ruwaandaan kabaja argachaa akka jirtus himaniiru.
''Ruwaandaan qorannoo wal-qixxumma koorniyaa irratti dhiyeenya adeemsifameen, biyyoota filatamoo kudhan keessa seentee jirti. Kanneen filatamoo shan keessa galuuf hojjechuun akka nuuf malu nan amana,'' jedhaniiru.
Fooramiin Diinagdee Addunyaa qorannoo wal-qixxummaa koorniyaa irratti baaseen Ruwaandaan biyyoota 153 keessaa sadarkaa sagalaffaa argattee jirti. Yaman biyya sadarkaa dhumaa irra jirtu dha.
Hooggansa paartilee morkattootaa dubartoota qollifate
Biyyattiin dubartoota aangeessuudhaaf humni isheen baaste akkasitti bu'aa yoo argamsiisu akka gammadan dubbatan Kaagaameen. Hirmaannaan dubartootaa karaa nageenyaa, daldalaafi haqaan akka dabalu nan fedhas jedhaniiru.
Kora namoonni 2,000 argaman irratti,''iddoo hundumaa akka aragamtan nan barbaada. Iddoo naaf kennitanis dubartiin akka bakka buutun fedha. Dhiiroti dubbii koo kanatti akka hin dallanne abdiin qaba. Garuu, yaadni isaanis akkuma koo tahuu mala jedhu
Manni maree bakka bu'oota uummataa teessoo dubartoota harka 52 kan qabu yoo tahu, kaabinee 26 keessaa immo 14 dubartoota dha. Gama daldalaafi dhimma haqaa irratti olaantummaan dhiiraa ni mul'ata.
Siyaasa Itoophiyaa: Hooggansa paartilee morkattootaa dubartoota qollifate
2 Muddee 2019
Viidiyoo, Isheen Eenyu? 5: Hoggantuun Microsoft Afrikaa Bahaa Amrootee Abdallaa